Ndị Kraịst, Hà Kwesịrị Ịna-agba Krismas? Baịbụl ọ̀ kwadoro ịgba Krismas?
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Dairi) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mongolian Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Xhosa Yoruba Zande Zulu
Ọtụtụ nde mmadụ nọ n’ụwa kweere na Krismas bụ ememme e ji echeta ụbọchị a mụrụ Jizọs Kraịst. Ma, ị̀ jụtụla onwe gị ma Ndị Kraist oge mbụ, dị ka ndịozi Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya, hà gbara Krismas? Ị̀ ma ihe Baịbụl kwuru gbasara ememme ncheta ụbọchị ọmụmụ? Ọ bụrụ na anyị amata azịza ajụjụ ndị a, ọ ga-enyere anyị aka ịma ma Ndị Kraịst hà kwesịrị ịna-agba Krismas.
Ihe mbụ anyị kwesịrị ịma bụ na o nweghị ebe Baịbụl kwuru na Jizọs ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ fere Chineke chetara ụbọchị ọmụmụ ya. Akwụkwọ Nsọ kọrọ naanị gbasara mmadụ abụọ mere ememme ncheta ụbọchị ọmụmụ ha. Mmadụ abụọ ndị a anaghị efe Jehova, bụ́ Chineke e dere Okwu ya na Baịbụl. Baịbụl akọghị akụkọ ọma gbasara ememme ncheta ọmụmụ abụọ ndị a. (Jenesis 40:20; Mak 6:21) Otu akwụkwọ aha ya bụ Encyclopædia Britannica, kwuru na Ndị Kraịst oge mbụ akwadoghị “ememme ndị ọgọ mmụọ bụ́ icheta ụbọchị ọmụmụ.”
Olee ụbọchị a mụrụ Jizọs?
Baịbụl ekwughị kpọmkwem ụbọchị a mụrụ Jizọs. Otu akwụkwọ aha ya bụ McClintock and Strong’s Cyclopedia kwuru, sị: “Anyị agaghị esili n’Agba Ọhụrụ ma ọ bụ n’ebe ọ bụla ọzọ mata ụbọchị a mụrụ Kraịst.” O doro anya na ọ bụrụ na Jizọs chọrọ ka ndị na-eso ụzọ ya na-echeta ụbọchị a mụrụ ya, ọ gaara eme ka ha mata kpọmkwem ụbọchị a mụrụ ya.
Ihe nke abụọ bụ na o nweghị ebe e dere na Baịbụl na Jizọs ma ọ bụ onye ọ bụla n’ime ndị na-eso ụzọ ya gbara Krismas. Akwụkwọ bụ́ New Catholic Encyclopedia kwuru na ebe mbụ a kpọtụrụ ịgba Krismas aha bụ na kalenda Philocalus, bụ́ kalenda ndị Rom. Ọ bụ n’afọ 336 ka e dere akwụkwọ e si nweta ihe ndị e dere na kalenda ahụ. Ihe ọ pụtara bụ na e dechaala Baịbụl, ihe dị ka narị afọ atọ agaakwa Jizọs bịara n’ụwa tupu e nwee ebe mbụ a kpọtụrụ Krismas aha. Akwụkwọ ahụ kwuziri, sị: “O doro anya na ọ bụghị Chineke kwuru ka a na-agba Krismas, e kwughịkwa ka a na-agba ya n’Agba Ọhụrụ.” *
Olee ihe Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-echeta?
Onye Ozizi Ukwu anyị bụ́ Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ihe doro anya ọ chọrọ ka ha na-eme, e dekwara ihe ndị ahụ na Baịbụl. Ịgba Krismas esoghị n’otu n’ime ha. Otú ahụ onye nkụzi na-agaghị achọ ka ụmụ akwụkwọ ya hapụ ihe ọ gwara ha mee, mewa ihe ọzọ, Jizọs achọghịkwa ka ndị na-eso ụzọ ya ‘gabiga ihe e dere ede’ n’Akwụkwọ Nsọ.—1 Ndị Kọrịnt 4:6.
Ma, e nwere otu ihe dị oké mkpa Ndị Kraịst oge mbụ mere. Ọ bụ Ncheta Ọnwụ Jizọs. Jizọs ji aka ya gwa ndị na-eso ụzọ ya mgbe ha ga na-echeta ọnwụ ya, gosikwa ha otú ha ga-esi na-eme ya. E dere otú ọ chọrọ ka ha si na-eme ya na ụbọchị ọ nwụrụ na Baịbụl.—Luk 22:7, 19; 1 Ndị Kọrịnt 11:25.
Dị ka anyị hụrụla, Krismas bụ ememme ncheta ụbọchị ọmụmụ. Ndị Kraịst oge mbụ emeghịkwa ememme ndị ọgọ mmụọ a. Ihe ọzọkwa bụ na e nweghị ebe Baịbụl kwuru na Jizọs ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ gbara Krismas. N’ihi ihe ndị a anyị lebara anya na ha, ọtụtụ nde Ndị Kraịst nọ n’ụwa niile ekpebiela na ha agaghị na-agba Krismas.
^ para. 6 Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu otú ihe ndị a na-eme na Krismas si malite, gụọ isiokwu bụ́ “Ndị Na-agụ Akwụkwọ Anyị Na-ajụ, Sị . . . Olee Ihe Ndị I Kwesịrị Ịma Banyere Krismas?” Ọ gbara n’Ụlọ Nche Disemba 1, 2014. Ọ dịkwa na www.jw.org/ig.